Izindaba - ICargo Bike Market
Izingxenye Zikagesi Ezithengisayo Zikagesi
Ama-Motor and Motor Kits
Mpintsha futhi Shintsha
Ama-Shockers ne-Handle T Set
Izingxenye ze-Cycle Spare
Imakethe Yezimoto Zebhayisikili
ICargo Bike Market (Inombolo Yamasondo: Amabili Anamasondo, Amathathu Anamasondo, Namasondo Amane; Isicelo: Umhlinzeki Wensizakalo ye-Courier & Parcel, Umhlinzeki Omkhulu Wokuthengisa, Ezokuthutha Kwabantu, Ukusingathwa, Imisebenzi kaMasipala, Nabanye; I-Propulsion: Electric Cargo Bike neDizili / Uphethiloli ICargo Bike; kanye nobunikazi: Ukusetshenziswa komuntu siqu nokusetshenziswa kwezebhizinisi / kweFleet) - Ukuhlaziywa Kwemboni Yomhlaba Wonke, Usayizi, Ukwabelana, Ukukhula, Amathrendi Nesimo Sezulu, 2020-2030
Ukugcizelelwa Ekunciphiseni Ukuminyana Kwezimoto kanye Nemvelo Yokuvikela Ukukhulisa Ukuthengisa
Ngokombono wezinto zokusebenza, amasondo amabili noma amabhayisikili ahlala engokhetho lokuqala lwabathengi emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yezimo zemvelo, ezokusebenza, ezefilosofi nezomnotho, ukufunwa kwamabhayisikili kuhlale kuphakeme ngokungaguquki kunezimoto ikakhulukazi ezindaweni ezisathuthuka njenge-Asia Pacific, iLatin America, neMpumalanga Ephakathi ne-Afrika. Amabhayisikili e-Cargo athole udumo olukhulu eminyakeni yamuva nje, ngenxa yokusebenziseka kalula kwabasebenzisi, isidingo esincane sokulungiswa, nezinselelo ezihlobene nokugcwala komgwaqo, ikakhulukazi ezifundeni ezisemadolobheni emhlabeni jikelele.
Njengoba imigwaqo yasedolobheni iqhubeka nokuvaleka ngesivinini esisheshayo, amabhayisikili ezimpahla avele njengenye yezindlela zokuhamba ezisebenza kahle kakhulu futhi ezilungele izinkampani zemithwalo ngenxa yalokho, isidingo samabhayisikili wezimpahla siye sahamba saya ohlangothini olubheke phezulu eminyakeni yamuva nje-- ukuthambekela okungenzeka kuqhubeke esikhathini sokubikezela. Ngemuva kwezinyathelo eziqhubekayo zokulawula ezenziwayo ukuvikela imvelo, abadlali abasebenza emakethe yamanje yamabhayisikili ezimpahla bagxila kakhulu ekukhiqizeni amabhayisikili kagesi wezimpahla. Abadlali abaningi abasebenza emakethe yamabhayisikili ethwala izimpahla kulindeleke ukuthi bandise iphothifoliyo yabo yomkhiqizo eminyakeni ezayo.
Ngemuva kwalezi zinto kuhambisana nokwenyuka okukhulu kwenani lokulethwa kwezentengiso emadolobheni ezifunda ezahlukahlukene, imakethe yamabhayisikili ezimpahla yomhlaba kulindeleke ukuthi idlule uphawu lwe-US $ 6.3 Bn ngasekupheleni kuka-2030.
Isidingo Esivela Kwisifunda Esithuthukile Siyanda; Amabhayisikili e-Cargo athola ukuthandwa njenge-Eco-friendly Logistic Solution
Eminyakeni embalwa edlule, ohulumeni nezinye izinhlaka ezilawulayo, ikakhulukazi ezifundeni ezithuthukile, benza imizamo yokubhekana nezinselelo eziningi ezihlobene nokuhamba kanye nomthelela wazo emvelweni. Ohulumeni abambalwa kanye nezinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni emhlabeni wonke bathambekele ekwandiseni ukwamukelwa kwamabhayisikili emithwalo njengenye indlela yokuhamba ngezinto ezisemadolobheni ezinobuhlobo. EYurophu, iCity Changer Cargo Bike Project ihlose ukukhulisa ukusetshenziswa kwamabhayisikili emithwalo yemoto njengendlela yokuhamba enempilo, yokonga isikhala, esebenziseka kalula futhi engambi eqolo kuzo zombili, ezizimele kanye nezentengiso.
Idlanzana lamaphrojekthi afanayo kulo lonke elaseYurophu kanye nakwezinye izifunda zomhlaba kulindeleke ukuthi libe nomthelela omuhle emakethe yamabhayisikili ezimpahla zomhlaba wonke esikhathini sokubikezela. Ukwanda okukhulu kwenani lamaphrojekthi kulindeleke ukuthi kuveze ukuqaphela okuqaphelekayo kubabambiqhaza abasebenza kuyo yonke imikhakha yezohwebo, yomphakathi kanye nezizimele. Ukwanda kokusetshenziswa kwamabhayisikili e-cargo wezimpahla ezizimele nezentengiselwano kanye nezicelo ezimile kancane kukhombisa ngokusobala ukuthi amabhayisikili emithwalo asheshe athola ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele.
Ngaphezu kwalokho, emazweni anjengeJalimane, e2019, ukuthengiswa kwamabhayisikili kagesi wezimpahla kudlula lokho kwezimoto zikagesi. Amadolobha amaningi ase-Europe, kubandakanya i-Amsterdam neCopenhagen ahamba phambili ngokusetshenziswa kwamabhayisikili ezimpahla njengendlela eqhubekayo yokuhamba.
Abadlali Bemakethe Bagxila Ekunwebeni Iphothifoliyo Yomkhiqizo Ukuze Bazuze
Izinkampani eziningana ezisebenza embonini yezimpahla, ezibandakanya i-DHL, i-UPS, ne-Amazon ziveze isifiso sokuhlola amandla emabhayisikili ezimpahla eNew York City, futhi sethule nohlelo lokushayela ukuze kuncishiswe isiminyaminya sezimoto ezindaweni ezithile zaseManhattan. Izindikimba zohulumeni basekhaya ezifana noMnyango Wezokuthutha waseNew York City ziya ngokuya zigxila ekuhloleni ukuphepha nokuthi kungenzeka yini amabhayisikili ezimpahla. Abadlali beMakethe abasebenza emakethe yamabhayisikili ethwala impahla manje baya ngokuya begxila ekwandiseni iphothifoliyo yabo yomkhiqizo nasekuqaliseni amabhayisikili ezimpahla ukuqinisa isikhundla sabo emakethe.
Isibonelo, ngo-Agasti 2020, uTern umemezele ukwethulwa kwebhayisikili elisha lezimpahla kagesi elenzelwe ikakhulukazi ukusetshenziswa ezindaweni ezisemadolobheni. Ngokufanayo, ngoJulayi 2020, uRaleigh wamemezela ukwethulwa kohlu olusha lwamabhayisikili ezimpahla zikagesi.
Amadolobha Emhlabeni Wonke Abeka Kuqala Ukuthuthwa Komoya Ophansi Phakathi Kwesifo Esiqhubekayo se-COVID-19
Ukuqhamuka kwesifo esiwumshayabhuqe se-COVID-19 kulindeleke ukuthi kube nomthelela olinganiselayo ekukhuleni okuphelele kwemakethe yamabhayisikili ethwala imithwalo emhlabeni wonke ngonyaka wezi-2020. Idolobha eliningi emhlabeni jikelele selibeke phambili izixazululo zokuhamba ezilinganayo nezikhiqiza ikhabhoni ephansi, kufaka phakathi ukuhamba ngebhayisikili nokuhamba ngezinyawo ukuya ukuqinisekisa ukuphepha kwabahlali. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yesibalo esandayo samacala emhlabeni jikelele, amabhayisikili emithwalo yezimpahla avele njengenye yezindlela zokuhamba eziphephe kunazo zonke futhi ezingenzeka kakhulu ukuqedela ukulethwa, izinsizakalo zokukhomba, nokulethwa kwamamayela wokugcina. Ngaphezu kwalokho, njengoba amabhayisikili emithwalo ethwala impahla engahlanjululwa kalula uma kuqhathaniswa nezimoto noma amaloli athutha impahla, isidingo samabhayisikili ezimpahla phakathi nobhadane oluqhubekayo lwe-COVID-19 siyanda.
Imakethe yamabhayisikili ethwala impahla kulindeleke ukuthi inwebe ku-CAGR engama- ~ 15% ngesikhathi sokuhlola. Ukugxila okwandayo ekwehliseni isiminyaminya sezimoto, ukunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni, nokusetshenziswa kwezixazululo zezokuthutha eziqhubekayo kuzohlala kuyisici esiyinhloko sokushayela imakethe yamabhayisikili ezimpahla phakathi nesikhathi sesimo sezulu. Ngaphezu kwalokho, amaphrojekthi amaningi kahulumeni, ikakhulukazi ezifundeni ezithuthukile, kungenzeka akhulise ukuqwashiswa okuphathelene namabhayisikili ezimpahla phakathi kwababambiqhaza emkhakheni wezokuthutha ngenxa yalokho, ukuthengiswa kwamabhayisikili ezimpahla kuzoqhubeka nokukhula.
ICargo Bike Market: Ukubuka konke
Imakethe yamabhayisikili ethwala imithwalo kulindeleke ukuthi inwebe ku-CAGR engu- ~ 15% ngesikhathi sesibikezelo, ngenxa yokwanda kwendlela abathengi abathenga ngayo online emhlabeni wonke. Ukukhuphuka kwesibalo sezimoto ezihambisa impahla, njengamaveni noma amaloli, kuyengeza ngokwengeziwe esiminyaneni sezimoto. Isibonelo, izibalo zikaHulumeni wase-UK zithi amaveni enza i-15% yethrafikhi isiyonke enqamula iNgilandi ngo-2019. Ukuminyana kwezimoto kubanga izingozi zomgwaqo nokumosha isikhathi nophethiloli.
Ukufudukela emadolobheni kuyakhuphuka ezifundeni ezahlukahlukene emhlabeni jikelele. Ngenyanga kaMeyi 2018, iZizwe Ezihlangene zashicilela kwabezindaba ukuthi ama-55% omhlaba wonke ahlala ezindaweni ezisemadolobheni, okulindeleke ukuthi afinyelele kuma-68% ngonyaka ka-2050. okuholele ekutheni kube nesiminyaminya nokuminyana kwezimoto.
Abashayeli beCargo Bike Market
Ukunyuka kokukhishwa kwezinto zokuhamba kuyinto ekhathazeka kakhulu emhlabeni wonke. Ukwanda kwenani lohambo lokulethwa kwempahla kuqhubeka nokuba nomthelela emazingeni okukhishwa. Isibonelo, i-European Union ithi uhambo lokuhambisa ludingida cishe u-15% walo lonke uhambo lwasemadolobheni emazweni aseYurophu, okuholela ekusetshenzisweni okuphezulu kukaphethiloli nasekukhipheni.
Ama-ejensi amaningi kahulumeni okusiza izinhlekelele kubandakanya i-Arlington Office of Emergency Management basebenzisa amabhayisikili emithwalo ukuthutha izimpahla lapho ezinye izimoto zokuthutha zingakwazi ukugibela ngesikhathi sezingozi. Ngaphezu kwalokho, i-European Cyclists 'Federation ikhuthaza ukusetshenziswa kwamabhayisikili emithwalo ngesikhathi sezinhlekelele noma izinhlekelele zemvelo. Ngakho-ke, ukwanda kwezicelo ezingajwayelekile kubhebhethekisa isidingo samabhayisikili emithwalo emhlabeni jikelele.
Ohulumeni emhlabeni wonke baqala izinhlelo zokwehlisa umthelela omubi wokukhula kwamadolobha kanye nenani lezimoto emvelweni. Ohulumeni bakhuthaza abantu ukuthi basebenzise lezi zixazululo njengenye indlela yamaloli ajwayelekile ahambisa impahla, ngenxa yezinzuzo ezinikezwa ngamabhayisikili ezimpahla njengokunciphisa isiminyaminya sezimoto nokukhishwa kwamapayipi omsila.
Izinselelo Zemakethe Yezimoto Zebhayisikili
Ubhadane lwe-COVID-19 seludale ukuthi iningi lamabhizinisi emhlabeni wonke liwohloke, ngenxa yokuvalwa ngenkani kwemisebenzi yokukhiqiza neyokukhiqiza. Lokhu kuholele ekutheni umnotho womhlaba ungene ezingeni lokukhula okuphansi kakhulu. Ubuningi bamabhizinisi kuyo yonke imboni buzimele futhi bayingxenye yokuhlinzekwa okukhulu emakethe. Ukuphazanyiswa kokuthengwa kwezinto okubangelwa ukumiswa kwezinsizakalo zokuhamba nokuthunyelwa kwezimoto kanye nokuncipha kwesidingo sezimoto emhlabeni wonke kungenzeka kubangele ukuthi imboni yezimoto yomhlaba wonke ithole isivumelwano ku-Q1 naku-Q2 we-2020.
Ukulinganiselwa kwezobuchwepheshe kwamabhayisikili emithwalo kuphazamisa ukusebenza kwawo, ngaleyo ndlela kuvimbele ukwamukelwa kwabo kwemithwalo esindayo nebanga elide. Amabhayisikili wezimpahla zikagesi anamabhethri amancane, anciphisa ububanzi bawo futhi adinga ukushaja njalo. Ingqalasizinda engathuthuki kahle yokushaja izimoto zikagesi yenza amabhayisikili emithwalo kagesi angasebenziseki ekuthuthweni kwebanga elide. Lokhu kudala ukufunwa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe bebhethri, okungenzeka ukuthi kwandise uhla lwamabhayisikili ezimpahla.
Ukuhlukaniswa Kwemakethe YeCargo Bike
Imakethe yebhayisikili yezimpahla yomhlaba ihlukaniswe ngokuya ngenani lamasondo, ukusetshenziswa, amandla, ubunikazi kanye nesifunda
Ngokuya ngenani lamasondo, izingxenye ezintathu ezinamasondo ziphethe imakethe yamabhayisikili e-cargo yomhlaba. Amabhayisikili amathathu wezimpahla ezinamasondo ahlinzeka ngokuhamba okuzinzile kakhulu, uma kuqhathaniswa nalokho okunikezwa ngamabhayisikili amabili wezimpahla ezinamasondo. Ngokwengeziwe, ibhalansi enikezwe ngamasondo amathathu yenza izingane zikwazi ukushayela ibhayisikili lezimpahla. Kulandelwe amasondo amathathu, ingxenye yamasondo amabili nayo ilinganiselwa ukuthi ibe nesabelo esikhulu, ngokwemali engenayo, ngesikhathi sesimo sezulu.
Ngokuya ngesicelo, i-courier & service service segment ibinengxenye enkulu yemakethe yebhayisikili yezimpahla yomhlaba. Ukukhuphuka kokuncamela ukuthengwa kwe-eCommerce kuyisici esibalulekile sokuthuthukisa ingxenye yesevisi yeposi nepasela. Amakhasimende angenza ukuthenga kwawo oku-inthanethi kulethwe ngebhayisikili yezimpahla noma aqashe amabhayisikili emithwalo; ngakho-ke, izitolo nezinkampani eziningana ezisebenza nge-inthanethi zigxile ekwandisweni kwebhizinisi ezifundeni ezahlukahlukene ukukhulisa ukufinyelela kwebhizinisi lomhlaba jikelele.
Imakethe Yebhayisikili Yezimpahla: Ukuhlaziywa Kwesifunda
1. Kususelwa esifundeni, imakethe yamabhayisikili ethwala impahla ihlukaniswe yaya eNyakatho Melika, e-Asia Pacific, eYurophu, eLatin America, naseMpumalanga Ephakathi nase-Afrika
2. INorth America ne-Europe kulindeleke ukuthi zibe izimakethe ezinenzuzo enkulu ngesikhathi sesimo sezulu. Uhulumeni wase-UK utshale imali ngezindlela eziningi ukuxhasa ukusatshalaliswa kwamabhayisikili ezimpahla. Ngaphezu kwalokho, ukufunwa kwamabhayisikili ezimpahla kuyanda eFrance, eSpain naseNetherlands, okungenzeka ukuthi kuhambise imakethe. Ukuvuka kokuqwashisa ngamabhayisikili ezimpahla eNyakatho Melika kulindeleke ukuthi kuthuthukise imakethe yamabhayisikili ezimpahla esifundeni.
Imakethe Yezimoto Zebhayisikili: Indawo Yokuncintisana
Abadlali abakhulu abasebenza ezimakethe zebhayisikili yezimpahla zomhlaba wonke bafaka
ICezeta, iDouze Factory SAS
I-Energica Motor Company, iGovecs Group
UJohammer E-Mobility GmbH
I-Rad Power Bikes LLC
URiese noMüller GmbH
I-Yadea Group Holding Ltd.
Amabhayisikili we-Yuba Electric Cargo
Abadlali abakhulu abasebenza ezingeni lomhlaba jikelele bandisa izinyathelo zabo ngokuzibandakanya ekuhlanganeni nasekuzuzeni nabadlali abaningana embonini. NgoSepthemba 2019, iMahindra neMahindra bavule isitshalo esisha eWashington DC, e-US, ukuqinisa ubukhona baso kulo lonke elase-US, futhi inkampani yabeka imali engaba ngu-US $ 1 Bn ekwandiseni indawo yayo yokukhiqiza e-US Niu International ikhiqiza iningi lemali etholakala ngokuthengisa yama-e-scooter ukusabalalisa okungaxhunyiwe ku-inthanethi noma ngqo kubathengi ngabodwa ku-inthanethi. Le nkampani isebenzisa imodeli yokuthengisa yesiteshi se-omni, ihlanganisa iziteshi ezingaxhunyiwe ku-inthanethi neziku-inthanethi, ukuthengisa ama-e-scooter.
Isikhathi sokuthumela: Mar-12-2021
Ikheli:15 # Changqing Road, B District Luyang Industrial Park, Shangrao High-Tech Zone, Isifunda saseGuangfeng, Idolobha laseShangrao, Isifundazwe saseJiangxi
Side Stand Puck, E Ukuhamba ngebhayisikili, Ishaja yebhethri ehamba phambili yeLithium Motorcycle, 22.5 Amakhava Amasondo, I-Light Blue Motorcycle, Mpintsha On Bike,